Maitiro Ekutengesa uye Kusimudzira Chako Chinotevera Chiitiko Pamhepo | Martech Zone
Maitiro Ekushambadzira uye Kukurudzira Yako Inotevera Chiitiko Pamhepo
Muvhuro, June 29, 2015 Svondo, June 28, 2015 Douglas Karr
Takambonyora pamusoro pekushandisa social media kushambadzira chiitiko chako chinotevera, uye kunyange mamwe chaiwo ekuti ungashandise sei Twitter kukurudzira chiitiko. Takatogovana a blueprint yekushambadzira chiitiko.
ichi infographic kubva kuDataHero, zvisinei, inopa ruzivo rwakanaka pakushandisa email, nharembozha, kutsvaga uye kushamwaridzana kusimudzira uye kutengesa zviitiko zvako.
Kuita kuti vanhu vauye kuchiitiko chako hakusi kungoita kuti chiitiko chacho chive chinonakidza, iwe unofanirwa kuchishambadza nenzira kwayo zvakare. Iyi infographic inokutora iwe kuburikidza neakanakisa maitiro ekuti unotengesa sei chiitiko chako online, kubva email kushambadzira, kune kukwidziridzwa munharaunda, kutsvaga injini optimization.
Heano mamwe akasimbiswa akanakisa maitiro ekushambadzira yako chiitiko online
Email Marketing -Shandisa mifananidzo uye mafoni anopindura maemail kuti awedzere kunyoresa mitengo.
Mobile Marketing -Kuwanda kuri kuita nhamba yekunyoresa kunoitika panharembozha saka ita shuwa kuti peji rako rekunyoresa rakagadziridzwa kuti uone nharembozha.
Tsvaga Engine Optimization -Gadzirisa peji rako rechiitiko kune anoshandisika mazwi uye shanda kuti uedze kutaurwa kubva kune dzimwe nzvimbo dzakakodzera angangoita 4 masvondo pamberi pechiitiko chako kuti uedze kuisa chinzvimbo zvakanaka.
Social Media Marketing - gadzira yakasarudzika hashtag uye kurudzira kubatanidzwa pasocial media pamberi uye panguva yechiitiko chako nezvimwe wongororo shure kwayo.
Tags: zvakanakisisa zviitochiitikokushambadzira kwechiitikochiitiko chekushambadzira maitiro akanakisachiitiko chekushambadzira email maitiro akanakisachiitiko chekushambadzira kusimudzirachiitiko mobilechiitiko mobile marketingwongororo yechiitikochiitiko chekutsvaga injini kugadzirisachiitiko seozviitikonzira yekutengesa chiitiko chako onlinenzira yekusimudzira chiitiko onlineonline chiitiko kushambadziraonline chiitiko kukurudzira
Zvese zvauchazombofanira Kuziva Nezve "Nguva Yakanaka"
Mobile Vhidhiyo Ads Ari Nezve Iyo Nyaya Pasina Iyo Kutengesa